Khin Maung Chin: ချစ်မိသွားပါသဖြင့် ၅
သူတို့နောက်မှာရပ်ပြီးပုန်းနေတဲ့ ခင်လေးနွယ်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်လေ... WoWwww ပေါ့..
''ဟာနွယ်ပါလားး ဘယ်တုန်းကရောက်လဲနွယ်ရယ်.. ကိုယ်နွယ့်ကို ဘယ်လောက်လွမ်းနေမယ်ဆိုတာမသိဘူးလားနွယ်..''
ဆိုပြီးပြေးဖက်လိုက်တာပေါ့...သူကတော့ရှက်နေရှာမှာပေါ့လေ..ရှက်နေလည်းဒီလောက်ကရှော့မရှိဘူးလေ.. အားလုံးသိထားပြီးသားဆိုတော့လည်းလွတ်လပ်တာတော့အမှန်ပါ.. ခင်လေးနွယ်ကတော့
ဘာမှပြန်မပြောပဲ ပြုံးရုံလေးပဲပြုံးနေတယ်လေ.. ဒီတော့ယမင်းကပဲ
အားလုံးကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးအော်ဟစ်ပျော်ရွှင်နေကြတာမို့ သူရှက်ပြီးငြင်းနေတယ်ထင်လို့ အတင်းပဲကျနော်ကသူ့လက်ချောင်းကလေးမှာ စေ့စပ်လက်စွပ်ကလေးကို စွပ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်...
အမှန်ကခင်လေးနွယ်ကျနော့်ကိုတစ်ခုခုပြောချင်နေပုံမျိုးဗျ.. ကျနော်ကလုံးဝအပြောမခံပဲအတင်းလုပ်နေတော့(လက်စွပ်ဝတ်ပေးတဲ့အလုပ်နော်) ခင်လေးနွယ်တစ်ယောက် ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပဲငြိမ်နေလိုက်ရတော့တာပေါ့..။
ပြိးတော့အားလုံးပျော်ပျော်ပါးပါးစားသောက်ကြပြီးတော့ ကျနော်ခင်လေးနွယ်ကို အိမ်ပြန်လိုက်ပို့လိုက်တယ်လေ... ပြိးတော့အိမ်ပြန်လာပြီး မိသားစုအားလုံးက ကျနော့်လက်ထပ်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်တိုင်ပင်ကြပြီး တစ်ရပ်ကွက်လုံးဆူညံနေအောင်သီချင်းတွေဘာတွေဖွင့်ပြီး ကခုန်နေကြတော့တာပေါ့..။
'' ဟေ့ ဆူညံလှချည်လား..ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲ?
ငါ့ကိုလည်းပြောဦး မှပေါ့ ''
'' ဒီလိုပါဆရာရယ်.. ကျနော်လက်ထပ်ဖို့အတွက် ရက်သတ်မှတ်လိုက်ပြီး အားလုံးပျော်လို့ ကခုန်နေကြတာပါဗျာ''
လို့ပြောတော့ သူက '' ဟာ မင်္ဂလာရှိလိုက်တာကွာ..လုပ်ပါဥိး ဘယ်သူနဲ့လည်း? ''
လို့မေးတော့ ကျနော်က ကျနော့်ချစ်သူ
ခင်လေးနွယ်နဲ့ နောက်အပတ်စနေနေ့ဘုရားကျောင်းမှာစေ့စပ်တော့မယ်ဆိုတာကို အတိုချုံးပြီးပြောပြလိုက်တာပေါ့လေ... ဗေဒင်ဆရာမျက်နာမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျ.. ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့
'' ငါ့အနေနဲ့မင်းနဲ့မင်းချစ်သူနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုတာ မင်းသိတယ်နော်သီဟ ? '' တဲ့...
'' အင်း..ဟုတ်တယ်လေဆရာ..ဘာဖြစ်လို့လဲ? '' လို့ပြန်မေးလိုက်တော့
'' အဲဒီလက္ခဏာအရ မင်းနဲ့မင်းချစ်သူတို့စေ့စပ်လို့လည်းမရဘူး၊လက်ထပ်လို့လည်းမရဘူးဆိုတာ ငါသိထားတယ်သီဟ.'' လို့ ကျနော့်မျက်နာကိုကြည့်ပြီးတစ်လုံးချင်းပြောလိုက်ပါလေရောဗျာ..
အသံတွေအားလုံးငြိမ်သွားတယ်လို့တောင်ကျနော် သူ့စကားကိုကြားပြီး ထင်လိုက်မိတယ်လေ... ချက်ချင်းသတိဝင်လာပြိး စတတ်နောက်တတ်တဲ့ကျနော့်ဗီဇအတိုင်း
'' ဟားဟား ဆရာကလဲ..ကဲဒါဆိုကျနော်ဆရာ့ကိုမေးမယ်နော်..ဆရာ့လက္ခဏာမှာ အရိုက်ခံရဖို့ဇာတာရှိလားမရှိဘူးလား? '' လို့မေးလိုက်တယ်ဗျ..။
သူလည်းကျနော်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲမရှင်းတော့ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ကျနော့်ကို ပြန်ကြည့်နေတယ်လေ... အားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်တစားနဲ့ကျနော်တို့ကိုငေးနေကြတာပေါ့..
'' ဟုတ်တယ်ဆရာ..တကယ်လို့ဆရာကအရိုက်ခံရမယ့်ဇာတာမပါဘူးဆိုရင် ခုကျနော်ဆရာ့ကိုရိုက်မယ်၊ ဆရာကအဲဒီဇာတာပါတယ်လို့ပြောရင်
ကျနော်ဆရာ့ကိုမရိုက်တော့ဘူး ၊ ကျနော်မေးတာဖြေပါဆရာ ''
လို့ပြောတော့သဘာဝကျတဲ့မေးခွန်းမို့အားလုံးက ဟေးးးးကနဲ ဝိုင်းအော်အားပေးကြတယ်လေ...အမွှာနှစ်ကောင်ကအဆိုးဆုံးပေါ့.. အဲဒီမှာဗေဒင်ဆရာလည်းဘေးကျပ်နံကျပ်ဖြစ်ပြီး ဘာမှမဖြေနိုင်တော့ဘူးလေ.... ဒီတော့မှကျနော်ကပြုံးပြီး
'' ဒီလိုပဲပေါ့ဆရာရယ်.. လက္ခဏာမှာမပါဘူးဆိုပေမယ့်ဖြစ်လာနိုင်တာတွေရှိသလို ပါနေပေမယ့်လွဲနိုင်တာတွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်.. အရာရာကို ဗေဒင်နဲ့ချည်းပဲတွက်ချက်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး ''
ဧည့်ခံမယ့်ကိစ္စတွေမှာပါ ကျနော့်အတွက်မမကြီးတို့မိသားစုအားလုံးမငြီးမငြူဝိုင်းဝန်းစီစဉ်ပေးလိုက်ကြတာများဗျာ.. စဉ်းစားမိတိုင်းကြည်နူးမိရပါတယ်..။ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာတော့ကျနော်လည်းအလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့ ခင်လေးနွယ်ဆီတောင်သိပ်မရောက်ဖြစ်ပါဘူး။ စေ့စပ်လက်စွပ် ဝတ်ပေးပြီးကတည်းကကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ကျနော်ကျေနပ်နေတော့သူဘာတွေဖြစ်နေ၊ကြုံနေလဲဆိုတာမသိနိုင်လောက်အောင်ကို အပျော်လွန်နေတယ်လေ..
သူ့အိမ်မှာက သူ့မောင်လေးအငယ်ကောင်မကျန်းမမာဖြစ်နေတာကျနော်ပြောပြပြီးပါပြီနော်... အဲဒီကောင်လေးအခြေအနေက နေ့နေ့ညညလိုဖြစ်နေတာဆိုတော့သူ့မိဘတွေကလည်းအသက်တွေကကြီး၊ အားကိုစရာဆိုလို့သူတို့သမီးခင်လေးနွယ်ကလွဲလို့ တခြားသူကလည်းမရှိဆိုတော့မောင်လေးအတွက်သောက်သောက်လဲ
ကုန်ကျခဲ့တဲ့စားရိတ်တွေ၊နောက်ကုန်ကျဦးမယ့်ငွေတွေအတွက် သူ့မိဘတွေစကားကျွံထားတဲ့စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ ခင်လေးနွယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်လေ.. အဲဒါကိုရှင်းပြဖို့လာတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကသူရှင်းပြနေတာကိုစောင့်မနေတော့ပဲ ကျနော်တို့အားလုံးဖြစ်ချင်နေတဲ့အတိုင်းအတင်းအကြပ်စေ့စပ်
လက်စွပ်ကိုစွပ်ပေးခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ..။ အဲဒီနောက်ပိုင်းလည်းခုကျနော်တို့စီစဉ်နေတဲ့မင်္ဂလာဆောင်မယ့်ကိစ္စတွေ၊အစီအစဉ်တွေကိုလည်း သူ့အံ့သြပျော်ရွှင်သွားအောင်ဆိုပြီးကြိုတင်မပြောမိဘူးလေ.။ တစ်ရက်အလိုကြမှအသိပေးပြီးမင်္ဂလာပွဲကိုတက်ခိုင်းတော့မယ်ပေါ့။ ဖိတ်စာတွေဝေငှပြီးနောက်ဆုံးမင်္ဂလာဆောင်မယ့်နေ့ရောက်တော့မှ
တခြားအစီအစဉ်တွေတခုပြီးတခုပြောင်းပြောင်း (အတီးအမှုတ်များပေါ့) လုပ်နေလိုက်ပေမယ့်အချိန်တွေသာကုန်သွားတယ်ခင်လေးနွယ်ကတော့ရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။ ဧည့်သည်တွေကလည်းအဝင်ဝကိုတကြည့်ကြည့်ပေါ့..။ဘိသိက်ဆရာတော်ကလည်းအခြေအနေကို
'' ကောင်လေးရေ ဘယ်မှာလဲကွသတို့သမီး? ''
'' လာမှာပါဗျာ..အခေါ်လွှတ်ထားပါတယ်.ခဏနေရင်ရောက်လာတော့မှာပါ.စိတ်မပူပါနဲ့ဆရာရယ် ''
ဆိုပြီးပြောနေတာကျနော်ကြားနေရတယ်ဗျာ..။ ဧည့်သည်တွေကလဲကျွတ်ကျွတ်၊ ကျွတ်ကျွတ်နဲ့ညံနေရောဗျာ..။
အမျိုးမျိုးဝေဖန်နေကြတာပေါ့.. အဲဒီအချိန်မှာကျနော့်သူငယ်ချင်းတိုက်ဂါးက ကျနော့်ပုခုံးပေါ်လက်တင်ပြီး
''ဘာမှပူမနေနဲ့သူငယ်ချင်း ခင်လေးနွယ်ရောက်လာတော့မှာပါ.. ငါဟိုကောင်တွေကိုထပ်လွှတ်ထားတယ်.စိတ်အေးအေးထားပါ.'' ဆိုပြီးအားလာပေးရှာပါတယ်.....
ပြောရင်းကပဲ တိုက်ဂါးလွှတ်လိုက်ကောင်နှစ်ကောင်စာရွက်တရွက်ကိုင်ပြ်ိးပြန်ရောက်လာကြတယ်လေ..။ ယောက်ဖနဲ့မမကြီးက စာရွက်ကိုအမြန်ဖွင့်ဖတ်လိုက်တော့မျက်နှာညှိုးသွားတယ်လေ.. တိုက်ဂါးကတော့ကျနော့်ကိုနှစ်သိမ့်ဖို့စကားရှာနေတယ်ထင်ပါရဲ့...
ယမင်းကတော့မမကြီးကိုဖတ်ပြီးမျက်ရည်ဝဲနေကြတာပေါ့... ထင်ရှားနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဧည့်သည်တွေလည်းအလျိုလျိုပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ကြတယ်လေ... မမကြီးနဲ့ယောက်ဖက ဧည့်သည်တွေကိုသွားပြီး
'' ဒီမှာ..ခဏလူကြီးမင်းတို့.. စားစရာလေးတွေတော့သုံးဆောင်သွားကြပါဦးလားဗျာ''
'' နေပါစေဗျာ သတို့သားအပါအဝင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးဝမ်းနည်းနေကြတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကျနော်တို့ကစားလို့သောက်လို့ရမျာလဲဗျာ.'' ဆိုပြီးပြောတဲ့သူကပြော...
'' ဟုတ်ကဲ့.. ခွင့်ပြုပါဦးနော်.စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ '' ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့သူကနှုတ်ဆက်နဲ့
'' မဖြစ်နိုင်ဘူး သူငါ့ကိုနောက်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်..လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးးး''
အားလုံးကမျက်ရည်ကိုယ်စီနဲ့ ကျနော့်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်လေ.. ဖြစ်ကြမှာပါပဲ..ဘာလို့ဆိုတော့ကျနော်ဘယ်လောက်ခင်လေးနွယ်ကိုချစ်နေတယ်၊ ဒီလက်ထပ်ပွဲကိုဘယ်လောက်အကုန်အကျခံပြီးခင်လေးနွယ်အံ့သြသွားရလောက်အောင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့တယ် ဆိုတာသူတို့အားလုံးသိနေတယ်လေ..
ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှမသွားပဲဒီမှာပဲစောင့်နေပါနော်..ကျနော်နွယ့်ကိုသွားခေါ်မယ်.. ကျနော်ကိုယ်တိုင်သွားမခေါ်လို့သူလိုက်မလာတာပါ.. ခုကျနော်သွားခေါ်မှာမို့ မကြာခင်ပြန်လာပြီး ခုရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ပဲ လက်ထပ်ပွဲကို ဆက်ကျင်းပကြတာပေါ့ဗျာ.'' ဆိုပြီးထွက်လာဖို့အလုပ်
'' ဟာ မမကြီးကဘာလို့ငိုနေရတာလဲဗျာ. ကျနော်ခုပဲမမကြီးရဲ့ယောင်းမကိုသွားခေါ်လာမှာပါ..မငိုပါနဲ့နော်..တ်ိတ်.မမကြီး တိတ်''
ဆိုပြီးမမကြီးကိုနှစ်သိမ့်ပေးရင်းခင်လေးနွယ်တို့အိမ်ဖက်ကို ထွက်လာခဲ့တော့တာပေါ့ဗျာ.. ခြေလှမ်းတွေကတော့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပါပဲ.. ကျနော်သွားခေါ်ရင်သူငြင်းမှာမဟုတ်မှန်းကျနော်ထင်နေတယ်လေ..။
May 20, 2011, 6:20:00 AM
May 20, 2011, 4:02:00 PM
May 20, 2011, 6:59:00 PM